Iindaba-Dibanisa amandla angaphakathi kunye nokusetha ukuhamba ngenqanawa-uShandong Gaoqiang ubambe ngempumelelo intlanganiso yoqeqesho lobuchwephesha
Ukuqinisa amandla angaphakathi kunye nokusetha ukuhamba ngenqanawa-uShandong Gaoqiang ubambe ngempumelelo intlanganiso yoqeqesho lobuchwephesha
I-SNF yokunciphisa amanzi
I-SNF (i-Naphthalene esekwe) iarhente yokunciphisa amanzi ihlala ibizwa ngokuba yi-β-Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (igama elifutshane: SNF, PNS, NSF, njl.). Yeyona arhente yokunciphisa amanzi inkulu kunye neyona isetyenziswa ngokubanzi e China ngoku (≥ 70%). Iphawuleka ngezinga lokunciphisa amanzi eliphezulu (iipesenti ezili-15 ukuya kuma-25%), akukho kungena komoya, impembelelo encinci ekubekeni ixesha, ukulungelelaniswa okuhle nesamente, ukusetyenziswa okudityanisiweyo nezinye izongezo kunye nexabiso eliphantsi. I-SNF isetyenziswa ngokubanzi ukulungiselela ukubhobhoza okuphezulu, amandla aphezulu kunye nekhonkrithi yokusebenza ephezulu. Ukuphulukana nekhonkrithi ngokudibanisa okulula kwe-SNF kukhawuleza. Ukongeza, ukulungelelaniswa kwe-SNF kwesinye isamente kufuneka kuphuculwe.
Umphathi jikelele wale nkampani, uZhu Menshou, kunye nabasebenzi abazimase le ntlanganiso, bamkele ngobubele uGqirha Gao. UZhu uveze ukuba phantsi kokuqhambuka kwesisifo, kuvulwe imodeli enkulu yeziseko zophuhliso, inkampani yangenisa amathuba ophuhliso kube kanye ebomini, kwaye amathuba ahlala egcinelwe abo bazilungiseleleyo. Inkampani kufuneka iphonononge ngenkuthalo imodeli yeshishini, kwaye ivelise rhoqo iimveliso kunye neemodeli zenkonzo. Kuphela ngokufunda rhoqo, ukusebenzisa oko bakufundileyo, rhoqo ukudala izibonelelo ezikhuphisanayo, kunye nokwakha amaqela asebenzayo, apho inkampani inokuhlala ingenakoyiswa.
Intlanganiso, uGqr Gao wenza i-poly carboxylic acid mama yotywala kunye neempawu zayo zokusebenza kunye nokusasazwa kwenkqubo yolawulo, uqeqesho lobuchwephesha, ucacisa i-PCE yotywala kamama eneempawu zokuhambisa izinto kunye neekhompawundi ngokuqwalaselwa, i-PCE kunye nezinto zayo ezisebenzayo Kwiipropathi zommiselo wekhonkrithi, ukudityaniswa kwezicelo zekhonkrithi rhoqo ulwazi olufana neengxaki kunye neendlela zokulwa, kwaye zidityaniswe nemeko yobunjineli eyiyo yetekhnoloji enxulumene nayo iqhubile nenkcazo eneenkcukacha. Ekugqibeleni, kwinxalenye yokunxibelelana kwesiza, uGqirha Gao uphendule imibuzo ebuzwe ngabasebenzi beSebe lezentengiso kunye nesebe lezobuchwephesha nganye nganye, ebonelela ngezimvo ezifanelekileyo malunga neengxaki eziphambili kunye nobunzima ekuhlangatyezwane nazo kwintengiso kunye nabasebenzi beenkonzo zobugcisa. kwindawo yeprojekthi.
Ngolu qeqesho, abasebenzi bathi baxhamle kakhulu: abasebenzi bobuchwephesha benkampani kunye nabasebenzi bezentengiso baqhubele phambili ngokubalula kwiimpawu zotywala bomama be-polycarboxylate kunye nezixhobo zayo zokusebenza kunye nolwazi lwethiyori kunye nezakhono zokusebenza kwitekhnoloji yolawulo lokudibanisa, kwaye bakwabonelela Inkxaso yethiyori kwinkampani ekusetyenzisweni kwetekhnoloji yezongezo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
"Funa umkhwa ngokubanzi, wakhe isiseko esomeleleyo kwaye uphumelele ikamva". Isiseko esihle sizisa imigaqo-nkqubo elungileyo yamashishini, kodwa inkampani inokuhlala ingenakoyiswa ukuba isebenza kwizakhono zangaphakathi zeqela, iqhubeka ngokuzihlaziya iimveliso, iphucula inqanaba lenkonzo, kwaye iyahlangabezana neemfuno zabathengi. Akukho siphelo ekufundeni nasemzabalazweni, kodwa yenza izinto ezintle, ungabuzi ikamva, ikamva lenkampani ye-gao Qiang inokulindelwa!